‘कारबाही परेका पत्रकारहरु पार्टीबिरुद्ध परिचालन भए’
काठमाडौ २०, बैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पाेलिटब्यूराे सदस्य एवं पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज अनिल शर्मा विरहीले पार्टीले कारवाही गरेका पत्रकारलाई प्रयाेग गरेर प्रचार युद्ध चलाईरहेकाे ठोकुवा गरेका छन् ।
पार्टीको मुखपत्र राताेखबरमा लेख लेख्दै नेकपाले केही समयअगाडि व्यक्तिवादी, महत्वाकाङ्क्षी, शङ्कास्पद, भ्रष्ट र केही अलमलमा परेका पार्टी निकट सञ्चारकर्मीहरूलाई कारबाही गरेको थियो ।
तिनै विभीषणहरूलाई सरकारी पक्षले प्रयोग गरेर विभ्रम खडा गरेकाे उल्लेख गरेका छन् । लेखमा उनले भनेका छन्,`नेकपाले केही समयअगाडि व्यक्तिवादी, महत्वाकाङ्क्षी, शङ्कास्पद, भ्रष्ट र केही अलमलमा परेका पार्टी निकट सञ्चारकर्मीहरूलाई कारबाही गरेको थियो । तिनै विभीषणहरूलाई सरकारी पक्षले प्रयोग गरेर विभ्रम खडा गर्यो ।
स्मरणीय छ पार्टी नीति बिरुद्ध गतिबिधि गरेपछि ने.क.पाले प्रभात चलाउने,कमल बुढा,जन्मदेव जैशी,बाबुराम भुषाल,तिलक अधिकारी,डिल्लीराज रावत,नवराज ढकाल लगायतलाई कारवाही गरेकाे थियाे र नेकपाले क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन खारेज गरेर जनपत्रकार संगठन,नेपाल गठन गरेकाे थियाे ।
यस बिषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पाेलिटब्यूराे सदस्य एवं पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज अनिल शर्मा विरहीले सो पार्टीको मुखपत्र राताेखबरमा लेखेको लेख यस्तो छ – “माक्र्सवादका प्रणेताहरू मूलतः अध्यक्ष माओले क्रान्तिका ३ जादुगरी हतियार पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चालाई भन्नुभएको छ । आजको युगमा यो अपूरो र अपूर्ण भएको छ । अब क्रान्तिका जादुगरी हतियारमा ‘सञ्चार’ लाई जोड्नुपर्छ । सञ्चारको महत्वमा उचित दृष्टिकोण नबनेका कारण आन्दोलनमा समस्या भैरहेको छ । पर्याप्त जनमत बनेको छैन र विभ्रमको शासन चलिरहेको छ । ‘लो टेक र हाई टेक’ को उचित समायोजनसमेत भएको छैन । नेकपा र उसमाथि लगाइएको वली–बादलमण्डलीको कथित प्रतिबन्धका सन्दर्भमा पनि त्यो मुखरित भएको छ ।
नेकपाका विरुद्ध भएको प्रचारयुद्धमध्ये नेताहरूको बीचमा अन्तरसङ्घर्ष भएको, कारबाही भएको, अरू पार्टीमा जान लागेको यस्ता अनेक प्रचार भए । जनयुद्धको समयमा चर्चित सिलगुडी प्रशिक्षणमा कार्यकर्ताले ‘आगो नबलीकन धुवाँ निस्कन्न’ भन्दा डा. बाबुराम भट्टराईले ‘ आजको प्रविधिले आगोबिना नै धुवाँ निकाल्न सकिन्छ’ भनेका थिए । नेकपाको नेतृत्वका विरुद्ध कृत्रिम धुवाँको कुइरीमण्डल धुवाँ शीतलहरझैँ फैलियो । नेकपामा अहिले पार्टी कार्यदिशा र नेतृत्व (मूलतः महासचिव) का विषयमा अन्तरविरोध शून्यबराबर छ । सिरक ओढेर मुड्की ताक्ने कायरहरू भागाभाग गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूका बीचमा झगडा, गोडा तानातान, लुटपाट, राष्ट्रघात, जनघातबाट वाक्क भएका कार्यकर्ता आदर्शको खोजीमा नलागून् भनेर ‘विप्लव पनि उस्तै हो’, प्रकाण्ड र वामदेव वा नारायणकाजीजस्तै हुन् भनेर विभ्रम खडा गर्नुपथ्र्यो । क्रान्तिकारी जनता र ध्रुवीकरणलाई निरुत्साहित गर्नुपथ्र्यो । त्यसैले अनेक कथा बनाइयो । व्यापक प्रचार गरियो । नेकपाप्रति सहानुभूति राख्ने पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्ने र एकपक्षीय रूपमा पञ्चायती कालको ‘गोरखा पत्रकारिता’ प्रवाह गर्ने सरकारी रणनीति छ जसका आधारमा देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिका विरुद्ध जनमत बनाउने र लूट तथा देशद्रोही अनुहार छोप्ने मनसुवा वली–बादलमण्डलीको छ ।
नेकपाको सङ्गठन, नैतिक र वैचारिक रूपमा विकास भइरहेकोमा विपक्ष र सरकारी स्रोत नै सहमत छ । अन्यथा यत्रो बबन्डर आवश्यक नै थिएन । अब प्रश्न उठ्छ, एकता नभएको भए विकास हुन्थ्यो त ? विकास छ त्यसैले पार्टीमा एकता छ । नेकपा शक्तिशाली बन्दै गएका कारण आक्रमण भएको छ । आक्रमण नेतृत्वमाथि हुन्छ र कार्यकर्ता र जनतालाई निराश पारिन्छ । रिहा भएपछि स्थायी समितिको बैठकमा अनुभूति मन्तव्य राख्दै भावुक मुद्रामा प्रकाण्डले ‘मलाई मार्ने निश्चित भएको भए म नेकपा–जिन्दावाद !, क. विप्लव–जिन्दावाद !! नारा लगाउने थिएँ’ भनेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विप्लव र प्रकाण्डका बीचमा अन्तरविरोध भनेर कृत्रिम धुवाँको खेती किन हुन्छ ? यो सामान्य समाचार मात्र होइन, वली– बादलमण्डलीले बोकेको बम–बारुद हो । यो अग्रमोर्चा हो, एसल्ट ग्रुपको फौज हो । इमानदारी र क्षमताद्वारा समस्याको समाधान गर्न सम्भव छ । आन्दोलन उठ्दै जाँदा प्रविधि र कलालाई अत्यधिक दुरुपयोग गरेर नक्कली समाचार (फेक न्युज) र भ्रम तथा आक्रमण झन् बढ्नेछ । त्यसैले अध्यक्ष माओले दुस्मनले समर्थन गर्दा, प्रशंसा गर्दा सतर्क हुनु र विरोध गर्दा सही छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । तसर्थ हामीले दुस्मनको प्रचारयुद्धलाई गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ र प्रभावकारी प्रतिरोध गर्नुपर्छ । नीतिगत प्रतिरोध मात्र होइन, घण्टा–घण्टामा व्यावहारिक प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।
अध्यक्ष माओले सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा भन्नुभएको थियो, ‘बन्दुकका हत्याराभन्दा कलमका हत्यारा झन् बढी खतरनाक हुन्छन् ।’ त्यसकारण वली–बादलमण्डलीको प्रचार तथा सूचनाफौजका विरुद्ध प्रभावकारी प्रचारफौज तयार नगरी समग्र लडाइँ जित्न सम्भव छैन ।”